Wararka | Warmaalnews.com | Page 20
DAAWO: Siyaasi Ramaax Oo Hanjabaad Diray “Tii Sideetankii Anu Dhignay Ayaanu Dhigi Oo Walaahiya”
Faah-faahin: Gabar kasoo baxday Salaadii Taraawiixda oo Tooreey lagu dilay
Gaalkacyo (warmaal news)- Wararka naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in kooxo hubeysan ay magaalada ku dileen gabar kasoo baxday masaajid, salaadii Taraawiixda kadib. Dilka oo ka dhacay dhanka waqooyi ee magaalada Gaalkacyo ayaa loo geystay gabar 22 sano jir aheyd oo la sheegay inay kasoo baxday Masjid ku yaala xaafadda Garsoor ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo. ...
Xukuumada Somaliland Oo Mamnuucdey Sameecadaha Dibada Masajidada Ee E Salaada Taahajudka + [ Muuqaal ]
Madaxweynaha Somaliland Oo Soo Xidhay Wejiga Koowaad Ee Barnaamujka Shaqo Qaran + [ Sawiro ]
Darar Weyne (warmaal news):- Madaxweynaha Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi, ayaa maanta si rasmi ah u soo xidhay wejiga koowaad ee barnaamujka carbiska dhallinyarada ee shaqo qaran oo muddo bilo ah ka socday deegaanka Darar-weyne ee dhinaca waqooyi Bari kaga beegan caasimadda Hargeysa. Munaasibadda uu madaxweynuhu kusoo xidhay wejiga koowaad ee barnaamujka shaqo qaran, ayaa waxa ka qaybgalay xubno kamid ...
Hargeysa Oo Mar Dambe Xamar Looga Talinayo Shacabka Reer Somaliland Dhimasho Ayey Ka Xigaan..” Suldaan Maxamed
Hargeysa (warmaal news):- Hargeysa oo mar dambe Xamar looga talinayo Shacabka reer Somaliland dhimasho ayey ka xigaan.” Sidaas waxa yidhi suldaanka guud ee beelaha Somaliland Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir. Suldaanka guud ee Somaliland Suldaan Maxamed Cabdiqaadir, oo u waramay Wargeyska Geeska Afrika, ayaa sidoo kale ka hadlay khilaafka ka dhex ka taagan Xisbiyada Qaranka ee salka ku haya qabsoomida Doorashooda ...
Daawo Ha Qoslin :- Faysal Iyo Eglan Show Maxaa Kala Qabsadey ??
Imaaraadka Carabta oo Nairobi ka wada shirqoolo ka dhan ah Soomaaliya
May 21, 2019 Nairobi (warmaal news) –Guddoomiye-ku-xigeenkii hore ee Barlamaanka dalka Kenya Faarax Macallim Maxamed ayaa banaanka soo dhigay shirqoolo ay Dowladda Imaaraadka Carabta ka wado dalka Kenya kaasoo ka dhan ah Soomaaliya. Faarax Macalin ayaa Dowladda Imaaraadka Carabta ku eedeyey inay dalka Kenya ka dhigteen meel ay ka fuliyaan qorshahooda ku aadan deganaansho la’aanta dalka Soomaaliya oo ah dalka ...
Dowladda Kenya ayaa dal ku gal u diidey xildhibaanno iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaalaiya, kuwas oo muddo saacado ah ku xannibnaa garoon ku yaalla Kenya, sida ay ila wareedyo u sheegeen VOA. Wasiir ku xigeenka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha Cismaan Libaax Ibraahim, Ilyaas Cali Xasan, oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyo xubno ...
Dowladda Iiraan Oo Digniin U Dirtay Mareykanka
Dowlada Iiraan ayaa si kulul uga jawaabtay hanjabaad ka soo yeertay Mareykanka. Wasiirka arrimiha dibadda ee Iiraan ayaa Mareykanka ugu baaqay in ay joojiyaan hanjabaada ay Iiraan u jeedinayaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Mohammad Javad Zarif ayaa si wayn u qaadacay hadalkii ka soo yeeray madaxwayne Trump ee ahaa “in Iiraan ay baab’in donaan” Mr Zarif ayaa uga digay ...
Somaliland Oo Iska Qoomameysay Wada Hadalkii Ay Somaliya La Furtay + [ Muuqaal ]